Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa
Anyị na-eto eto na cosme anyị: iwu nke ịkụ na nlekọta
Osisi ihe osise: echiche mbụ banyere etu esi achọ ubi gị mma
Aromas nke ubi mgbede: nhọrọ nke ụdị okooko osisi kachasị mma
Agrotechnics cultivation nke apụl "Antonovka"
Otu esi emebe ma dozie uzo uzo ugbo
Ụzọ nke mmeputakwa nke tulips, ndụmọdụ maka ilekọta okooko osisi mmiri
Nkọwa nke ụdị shallot
Kedu ihe ọkụkọ Kochinquin na-ele anya na foto ahụ na ihe ndị dị aṅaa ka ụmụ nnụnụ na-azụlite nke ụdị a?
Ngwurugwu greenhouse Polycarbonate: ntọala griin na-eme-ya-onwe gị
Orchid na-agbanye na mgbọrọgwụ ya: oji kpatara ya na otu esi egbochi ya?
Ịchọpụta nke ọma na tomato dị iche iche "Ihe ebube nke ihu igwe." Ndụmọdụ dị mma maka ịmalite ma na-elekọta n'ụlọ na n'ogige
- Editor Si NhọRọ -
Na-arụ ọrụ akuku Roses na ọdịda
Otu esi elekọta eze begonia n'ulo
Kedu nnukwu ọkụkọ
Sinyuha acha anụnụ anụnụ: nkọwa, cultivation, foto
Otu esi echekwa ntu oyi n'oge obibi
Nlekọta orchid: ọmụmaatụ nke ifuru ifuru n'ụlọ
Ụdị tomato ndị Dutch dị na foto na nkọwa
Otu esi egbusi osisi n'egbughị oge, usoro mgbochi mmiri
Idebe ahịhịa Haysex pụrụ iju anya site na ọnụ ọgụgụ nsen
Ifuru Ginura - nlekọta, osisi wicker, odo odo na variegate
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na turkeys na-egwu ibe ha
Otu esi achikota mkpuru osisi akuku maka igba onwe gi
Usoro ọgwụgwọ anụmanụ "Flexoprofen": ntụziaka, usoro onunu ogwu
Rosanna ngwakọ - akuku na nlekọta
Heather: ilekọta na mmeputakwa n'ụlọ
Anyị na-eto eto na ubi
Cabbagekụ mkpụrụ akụ: atụmatụ dabere na ụdị na ụdị dị iche iche
Mint: homezọ nlekọta ụlọ na usoro ọmụmụ
-Atụ Aro -Akpali Isiokwu
Ndị Swans na-anọchite anya iguzosi ike n'ihe nke njikọ. Ma ọ bụghị n'efu: mgbe ha chọtara di na nwunye, ha na-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye ibe ha n'oge ndụ ha niile. E wezụga nke ahụ, ha bụ ezigbo nne na nna. N'ịzụta mkpụrụ ahụ, di na nwunye na-elekọta ụmụ ha na-elekọta ụmụ ha ruo mgbe ha toro. Ka anyị lebakwuo anya na nnụnụ ndị a mara mma: otú ha si ewulite ezinụlọ ha ma bulie ọgbọ ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ Foxy Chickens - ụdị ma ọ bụ obe? Foto, nkọwa na nkọwa
A na-erite uru dị iche iche nke anụ ọkụkọ ọkụkọ anụ ọkụkọ na ịdị mfe nke ụdị anụ ọkụkọ a na ịrụpụta ọrụ ọma. Ha sitere na ụdị broiler, ma nwee àgwà nke anụ ahụ na ụmụ anụmanụ. Ịdị nfe na ntanarị ndụ kachasị dị n'ime ụdị ọkụkọ a. Site na mgbasa ozi na mba Europe, ha nọ n'elu iri.
Ihe ị ga - eme n’oge opupu ihe ubi iji nwee ụdị ụtọ rasberi
Ndị mmadụ amaragoro raspberries ogologo oge. Na Russia, a bịara mata beri na narị afọ nke XII wee gbasaa ebe niile. N'ime ụwa, e nwere ụdị raspberries karịrị narị isii. Ọ toro na mba iri atọ na asatọ, n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana mpaghara ndịonwe. Iji nụ ụtọ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ n'oge ọkọchị na ụbịa, ịkwesịrị ị attentiona ntị na raspberries site na ụbọchị ọkụ mbụ.
Ọrịa na-eguzogide ọgwụ dịgasị iche - Nri Sweet Tomato
Ndị niile hụrụ tomato n'anya nwere mmasị dị iche iche. Onye nwere mmasị na nnukwu ma na-atọ ụtọ, ebe ndị ọzọ na-achọsi ike. Ụfọdụ dị ka ude a ma ama, ebe ndị ọzọ chọrọ ndị pink pink. Maka onye ọ bụla chọrọ inweta mkpụrụ dị elu ma nwee griin haus, e nwere ụdị dịgasị iche iche dị mma, a na-akpọ ya "Nri ụtọ". Nke a na tomato egosiwo onwe ya dị ka mkpụrụ na-eguzogide ọgwụ na ọrịa.
Nzuzo nke ihicha mmiri hawthorn na eletrik eletrik na ngwa ndakwa nri: họta ezigbo okpomọkụ
Hawthorn bụ ụzọ dị mma iji wepụ nchekasị. Iwere mkpụrụ tomato ole na ole n'ime ụyọkọ na tii tii kachasị amasị gị, ị ga-enwe mmetụta zuru ezu na ntụrụndụ na ike nke ume. I kwesịkwara icheta na hawthorn bụ antiseptic. Iwe mkparụ ahụ na-enye gị aka kachasị mma.
Nzọụkwụ-usoro maka ọrụ mmiri
Calceolaria - akpụkpọ ụkwụ mara mma
Eyịm Ijipt ma ọ bụ elephant elephant: gịnị bụ Rokambol, olee otú e si etolite ma debe ya?
Ịhapụ ikpo mmiri: 4 ụzọ iji chebe
Aha ya bụ Hamedorea
Rịba ama maka ndị florists: mgbe ọ kacha mma ka ị gbanwee orchid phalaenopsis n'ụlọ?
Na-eto eto clariki na seedless ụzọ: kụrụ ma na-elekọta
Tomato dịgasị iche iche "Tarasenko Yubileiny": nkọwa na kwe nkwa maka na-eto eto elu-edu tomato iche iche